အမျိုးသမီးများ အရေး ရှေ့တိုး လုပ်ဆောင်မှု #SeeHer ဆုကို မင်းသမီး ဂယ်ဂါဒေ့ါတ် လက်ခံရယူမည် - Yangon Media Group
အမျိုးသမီးများ အရေး ရှေ့တိုး လုပ်ဆောင်မှု #SeeHer ဆုကို မင်းသမီး ဂယ်ဂါဒေ့ါတ် လက်ခံရယူမည်
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂
မင်းသမီးဂယ်ဂါဒေါ့တ်သည် ဟောလိဝုဒ်တွင် အမျိုးသမီးများအတွက် နေရာအခွင့်အရေးကို ကျယ်ပြန့်လာစေသည့်အတွက် ရုပ်ရှင်ဝေဖန်သူများက ရွေးချယ်သောဆုပေးပွဲတွင် #SeeHer ဆုကို လက်ခံရယူမည်ဖြစ်သည်။ ‘Wonder Woman’ ရုပ်ရှင် သရုပ် ဆောင်မင်းသမီး ဂယ်ဂါဒေါ့တ်သည် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် ဆုပေးပွဲ၌ ယင်းဆုကို လက်ခံရယူ မည်ဖြစ်သည်။
ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ”ဂါဒေါ့တ်ဟာ တစ်နှစ်လုံးမှာ ‘Wonder Woman’ အနေနဲ့ ငွေရောင်ပိတ်ကားထက်မှာ ပါဝင်ခဲ့ရုံသာမက လက်တွေ့ဘဝထဲမှာလည်း ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းထဲက အမျိုးသမီးတွေကို တွန်းအားပေးပြီး လိင်သာ တူညီမျှမှုနဲ့ ကွာခြားမှုတို့အတွက် တိုက်ခိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကိုယ်စားပြုတဲ့ အင်အားကြီးမားတဲ့ အသံတစ်ခုအနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
‘Wonder Woman’ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ပတ်တီဂျက်ကင်ကပေးအပ်မည့် ယင်းဆုကို မင်းသမီးက လက်ခံရယူမည်ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်တာမိုနီ ကာမြို့ရှိ Barker Hangar ၌ ကျင်းပမည့် ယင်းဆု ပေးပွဲကို CW ရုပ်သံလိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည် ဖြစ်သည်။ ‘Wonder Woman’ ရုပ်ရှင်ကို ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးနောက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၈၂ဝ ကျော် ရရှိခဲ့ပြီး စံချိန်တင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲ ဇာတ်လမ်းကိုလည်း ဖန်တီးနေပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် ဖြန့်ချိနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
''တောကျီးကန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက မင်းသမီးအဓိကဇာတ်လမ်း မဟုတ်ပါဘူး'' မိုးဟေကို
ဆိုင်ကယ်မျိုးစုံ နှစ်သောင်း သုံးထောင်ကျော်ကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်း ၄ ခုမှ တစ်ဆင့် ပြည်တ?
ဘိုင်ယန်နည်းပြရာထူးက ကလော့ပ်နှင့် ကွက်တိကျသည်ဟု အေးဂျင့်သုံးသပ်
ရာသီကုန်တွင် အနားယူမည့် ပီတာချက်ကို နေရာပြန်ပေးရန် ချဲလ်ဆီးစီစဉ် ပီတာချက်ကို ကျောနံပါတ်-၁
‘ကိုယ်အရမ်းအားသန်တဲ့ဘက်မဟုတ်တော့ အမြဲတမ်းတော့ သီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အိုင်ဒီယာအသစ်တွေမထွက??